Imbali kunye neNkcubeko IMfazwe Yehlabathi I
Ngowe-1914, amagosa ayisithupha amakhulu eYurophu ahlukana ukuba abe imibini emibili eya kuba ngamacala amabini anxamnye neMfazwe Yehlabathi I. IBrithani, iFransi kunye neRashiya yakha i-Triple Entente, ngoxa iJamani, i-Austria-Hungary kunye ne-Italy bajoyina kwi-Triple Alliance. Le mibandela ayengeyena yodwa yimbangela yeMfazwe Yehlabathi I , njengabanye aba-mbali-mlando abaye balwela, kodwa badlala indima ebalulekileyo ekuphuthumeni ukuqhuma kweYurophu kwimpikiswano.
Ukulandela uchungechunge lwamanqoko empi kusukela ngo-1862 ukuya ku-1871, uKhansela wamaPrussia u- Otto von Bismarck wabumba urhulumente omtsha waseJamani kwiindawo ezincinci ezincinane. Emva kobunye, uBismarck wayeyika ukuba iintlanga ezakhelene nabo, ngokukhethekileyo iFransi neAustria-Hungary, zinokutshatyalaliswa kweJamani. Yintoni uBismarck ayeyifuna yayiyinkqutyana yokuqhagamshelana kunye nezigqibo zomgaqo-nkqubo wangaphandle ezokuzinzisa ukulinganisela kwamandla eYurophu. Ngaphandle kwabo, wayekholelwa, enye imfazwe yelizwekazi yayinakuphepheka.
UBismarck wayesazi ukuba intsebenziswano neFransi yayingenakwenzeka ngenxa yokunyuka kwentetho yaseFransi ngolawulo lwaseJalimane lwe-Alsace-Lorraine, kwiphondo elithatyathwe ngo-1871 emva kokuba iJamani inqobe iFransi kwimfazwe yaseFranco-Prussian. IBrithani, okwangoku, yayikulandela umgaqo-nkqubo wokuchithwa kunye nokwenqabela ukwenza nayiphi na imibutho yaseYurophu.
Kunoko, uBismarck waya e-Austria-Hungary naseRashiya.
Ngomnyaka we-1873, i-Three Emperors League yenziwe, yathembisa ukuxhaswa kwexesha lokulwa phakathi kweJamani, u-Austria-Hungary kunye neRashiya. I-Russia yashiya ngo-1878, kwaye i-Jamani kunye ne-Austria-eHungary yakha i-Dual Alliance ngo-1879. I-Alual Alliance ithembisa ukuba amaqela aya kuncedana ukuba iRashiya ibalwe nawo, okanye ukuba iRashiya incedise elinye igunya lokulwa naloo hlanga.
Ngowe-1881, iJamani kunye ne-Austria-Hungary baseqinisa ubuhlobo babo ngokudala i-Triple Alliance kunye neItali, nazo zonke iintlanga ezintathu zithembisa ukuxhaswa ukuba zimele zihlaselwe yiFransi. Ngaphezu koko, ukuba nayiphi na ilungu elitholakalayo lilwa neentlanga ezimbini okanye ngaphezulu kwangoko, ukusebenzisana kuya kubakhokelela. I-Italy, i-weakest of the three nations, iphoselele kwisigatshana sokugqibela, ikhuphe i-deal if i-Triple Alliance malungu. Ngokukhawuleza emva koko, i-Italy yasayina isivumelwano kunye neFransi, sithembisa inkxaso xa iJamani iwahlasela.
UBismarck wayenqwenela ukuphepha ukulwa nemfazwe emibini, okwakuthetha ukwenza uhlobo lokuvumelana kunye neFransi okanye iRashiya. Ngenxa yobunxungu obudlelane neFransi, uBismarck wasayina into awayeyibonisa ngokuthi "isivumelwano sokubuyisana" kunye neRashiya. Yathetha ukuba zombini iintlanga ziza kuhlala zingathathi hlangothi xa umntu ebandakanyeka kwimfazwe nomntu wesithathu. Ukuba loo mpi yayinesiFransi, iRashiya yayingekho mfuneko yokunceda iJamani. Nangona kunjalo, le mvumelwano yahlala kuphela ngowe-1890, xa yavunyelwa ukuba ilahlekelwe nguRhulumente owawuthatha isikhundla seBismarck. Abantu baseRussia babefuna ukuyigcina, kwaye oku kubonakala ngathi yimpembelelo enkulu ngabazukeli bakaBismarck.
Emva kokuba uBismarck evotelwe ngaphandle kwamandla, umgaqo-nkqubo wakhe wangaphandle waqhelana nokuhla. Unomdla wokwandisa ubukhosi bakhe besizwe, iKaiser Wilhelm II yaseJamani yaphinda ilandele umgaqo-nkqubo wokuhlaselwa komkhosi. Ukuxhaswa ngamaxhoba aseJamani, iBrithani, iRashiya kunye neFransi baqinisa ubudlelwane babo. Okwangoku, iinkokheli ezitsha zaseJamani zazibonakalisa zingenakukwazi ukugcina imibambano yeBismarck, kwaye ngokukhawuleza isizwe sasizungezwe ngamagunya anonya.
IRashiya yangena kwisivumelwano neFransi ngowe-1892, ipapashwe kwiNgqungquthela yamaGrike yaseFranco-Russian. Iimigaqo zazingekho, kodwa ziboshwe zombini iintlanga ekuxhaseni omnye xa zifanele zibandakanyeke kwimfazwe. Yenzelwe ukulwa ne-Triple Alliance. Ubuninzi bezopolitiko Bismarck wayeyicinga ngokubaluleka kokusinda kweJamani kwiminyaka embalwa, kwaye isizwe saphinda sabhekene nesongelo kwimida emibini.
Exhalabele ngamasongelo okulwa neengxowankulu ezifunyenwe kwiikoloni, iGreat Britain yaqalisa ukufuna izivumelwano zayo. Nangona i-UK ingazange ixhase iFransi kwiMfazwe yaseFranco-Prussia, ezo ntlanga zombini zathembisa inkxaso yezempi kwelinye i-Entente Cordiale ka-1904. Emva kweminyaka emithathu, iBritani yasayina isivumelwano esifanayo neRashiya. Ngomnyaka we-1912, i-Anglo-French Naval Convention yadibanisa iBrithani neFransi ngokusondele kwimpi.
Izivumelwano zabekwa. Xa u- Archduke wase-Austria uFranz Ferdinand nomkakhe babulawa ngowe-1914 , onke amagunya amakhulu aseYurophu asabela ngendlela eya kukhokelela kwimfazwe epheleleyo kwiiveki. I-Triple Entente yalwa ne-Triple Alliance, nangona i-Italy yayisishintsha ngokukhawuleza. Imfazwe apho onke amaqela acinga ukuba aya kugqitywa yiKrisimesi ka-1914 endaweni yoko yahudula iminyaka emine ubudala, ekugqibeleni izisa i-United States kwimpikiswano. Ngethuba leSivumelwano saseVersailles lisayinwe ngo-1919, ngokuphelisa ngokusemthethweni iMfazwe Enkulu, amasosha angaphezu kwezigidi ezili-11 kunye nezigidi ezi-7 zabantu basebefile.
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe yeSomme
IMfazwe Yehlabathi I Mitteleuropa
IMfazwe Yehlabathi I 101
Imfazwe Yehlabathi I: Umsebenzi kaMichael
Ukubulawa kweArchidu Franz Ferdinand, ngo-1914
Imfazwe Yehlabathi I: U-Air Marshal William "UBilly" uBhishophu
Idioms kunye neentetho - Fumana
Amagama abadlali Bafumana ukuhlawula okulingana namaqela e-Stanley Cup
Imeko ekhoyo e-Iran
AbaMnyama bamaMnyama kunye neeNjineli zeMichiza
Ukuqonda Ubuthathaka kunye neentlobo ezahlukeneyo
Yonke Ngezinto ezibalulekileyo zobomi beSikhism
Ukwahluke phakathi koNcedo-mali kunye neNkxaso-mali
Ukuphuhliswa kweBhanki kwiNguqulelo yeShishino